5 Ebe kacha mma Pụrụ Iche na Europe | Chekwa ụgbọ oloko
Ụlọ > Njem Europe > 5 Ebe kacha mma Pụrụ Iche na Europe
Echiche na ikuku Petrin Hill ogige na-eme maka otu 5 kasị mma ntụpọ tụrụ na Europe. Egwuregwu, emi odude ke Lesser Town, Petrin Hill bụ ogige a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma maa mma na-eleghara Prague Castle. Petrin na-enye echiche kachasị mara mma nke isi obodo, inwere ike ịrịgo elu elu ulo ahu n'ezie ngosi ndị mara mma nke obodo, nnukwu ụlọ, na àkwà mmiri.
Petrin Hill zuru oke maka picnic na Europe n'oge opupu ihe ubi, ọdịda ma ọ bụ ọkọchị. The leafage will look pụtara na ọdịda na oge opupu ihe ubi na ọkọchị, osisi na ala niile ga na-ama ifuru, na-achakwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Naanị jidere onwe gị ụfọdụ scones na tomato site Iclọ ebe a na-eme Artic a ga-edozikwara gị ihe osise dị egwu na Prague.
3. Pikiniki N'ọdọ mmiri Na Lago Di Braies, Ịtali
Mmiri mmiri na-acha odo odo na elu ugwu na-atụgharị uche na ọdọ mmiri ahụ, the views of Lake di Braies in South Tyrol in Italy will color your picnic with beautiful memories. Istali bụ heaven culinary, jikọtara ya na ọdọ mmiri ndị dị egwu na ugwu, ọ baghị uru ịkọwa ọtụtụ ihe kpatara ọdọ mmiri a dị n'elu anyị 5 kasị mma ntụpọ ntụpọ na Europe.
Paris enweghi ọgụgụ ubi mara mma na picnic tụrụ tinyere ndị Seine. Ebe kachasị mma na Paris dị mma na Paris dị n'akụkụ ebe a na-ahụ anya Champs de Mars.
Ọ bụ nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị n'etiti arrondissement nke asaa na ifflọ Eiffel. O zuru oke maka eserese na Paris ma na-enye oche kachasị mma maka ọdịda anyanwụ. Na mgbakwunye na odida obodo, ọ bụkwa otu n'ime 10 echiche kachasị mma na Eiffel Tower na Paris.
Kwa ezinụlọ ndị Paris na-anwụ n'oge ọkọchị na-abịa kpoo anyanwụ ma ọ bụ nwee ọmarịcha ọdịda nke ubi. Ọ dị jụụ ma na-enye ọmarịcha ọnọdụ maka ilele ọkụ abalị nke Eiffel Tower.
ebe a na Chekwa ụgbọ oloko, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịchọta tiketi ụgbọ ala kachasị ọnụ ala na ebe ọ bụla mara mma picnic dị na listi anyị.
You chọrọ itinye mgbagha blọọgụ anyị “5 Kachasị Ego Ego Na Yurop” na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-picnic-spots-europe%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት– (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
picnic	picniceurope	PicnicinParis	picnicspotseurope	picnictable	udu mmiri	TravelPrague	njem Switzerland
Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Ụgbọ okporo ígwè njem Scotland, Ụgbọ okporo ígwè njem Switzerland
Njem ụgbọ oloko, Zụlite njem Britain, Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Germany, Ụgbọ oloko njem Holland, Njem Europe